इंग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन सुरु, आज काे-काे भिड्दै ? – Everest Dainik – News from Nepal
इंग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन सुरु, आज काे-काे भिड्दै ?
काठमाडौं, साउन २६ । नौ महिनासम्म चल्ने इंग्ल्याण्डको शीर्ष डिभिजनको फुटबल इंग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन सन् २०१८-१९ आजदेखि सुरु भएको छ । म्यानचेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटीको खेलसँगै प्रिमियर लिगको सिजन सुरु भएको हो । घरेलु मैदान ओर्ल्ड ट्राफोटमा विश्व विजेता फ्रान्सेली मिडफिल्डर पाउल पोग्बाको प्रदर्शनका कारण युनाइटेडले लेस्टरलाई २-१ गोलले हराउँदै लिगमा सुखद सुरुवात गरेको छ ।
लिगमा आज ६ खेलहरु हुनेछन् । साँझ सवा पाँच बजे न्युकासल र टोटनह्याम भिड्नेछन् । त्यस्तै पौने ८ बजे ४ खेलहरु हुनेछन् । बर्नमाउथ र कार्डिफ सिटी, यसै सिजन बढुवा भएको फुलह्याम र क्रिष्टल प्यालेस, हडर्सफिल्ड टाउन र चेल्सी तथा वाटफोर्ड र ब्राइटन भिड्नेछन् । त्यस्तै राति सवा १० बजे ओल्भरह्याम्टन र एभर्टनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।